Chii chimwe, vaifamba nechitima somunhu nomad ane yakawanda nezvimwe zvakanaka. Unokwanisa kuwana zvose nguva yako, uye zvitima kukupa mukana kuzviita zvakanaka uye pasina hassles. Zvingava nonoka neapo, asi hapana kushushikana mupfungwa kwadzinoita ichi okufamba, nepo ndege chinhu zvakasiyana zvachose chinhu. Kana uchifamba nendege, pane dzose kunounzwa rakawandisa dzendege uye overzealous kuchengeteka matanho. Chii chimwe, mune zvimwe zviitiko, uchafarirwa. nokwawaienda nokukurumidza kana ukawana chitima!
Maitiro Ekuchengetedza Mari Paunodzidzisa Kufamba seNomad
mari Most akapedza apo Train Travel somunhu Nomad inoenda kukamuri bookings. zvisinei, kana iwe bhuku hostels, unogona kuponesa mari yakawanda sezvo vari zvikuru inokwanisika kupfuura mumahotera uye kupa ruzivo nani uye kupfuura asingakanganwiki. Chii chimwe, kana iwe kufamba woga, unogona bhuku chero vanhu vakawanda mariri mukamuri, rinova yakachipa pashiri Ipfungwa. Uye kuvimba nesu, iwe uchazoda izvi nekuti izvi zvinokutendera kuti ushamwaridzane nevamwe vanofunga-vafambi.
Chinotevera chinhu unodya kure panguva nemari yako, tsime, kudya. Unogona kuponesa mari zvokudya nokugadzirira zvokudya zvenyu hostel kana Apartments. Mahostela mazhinji nedzimba dzinopa makicheni aunogona kushandisa mahara. Chii chimwe, ari Hostel Mamwe mukana kuti kutamba nevanhu uye gadzirira vamwe zvokudya kugoverana.
Chitima Kufamba ndeye Nomad Matipi
Yeuka navi chiedza. Kana iwe uchazova chitima parwendo nomad, uchava chinhu nguva nyore chete akatakura chii zvakafanira. Hostels kupa yakawanda zvinokosha Amenities akaita matauro, hairdryers, nezvimwe zvakadaro, saka haufaniri kuuya yenyu. Plus, kunowanzosanganisira vane washing machine uye dryers dzaungashandisa kuti Euro kana maviri, saka haufaniri kutora nguvo zvakawandisa nemi kana. Kana uchida kufamba akawanda zvinhu, war kungava nani sarudzo.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)